जेलबाट भागेका ‘टिके डाँका’ माथी प्रहरीद्वारा गोली प्रहार :: a1nepal.com.np
जेलबाट भागेका ‘टिके डाँका’ माथी प्रहरीद्वारा गोली प्रहार
काठमाडौं, २७ जनवरी । डिल्लीबजार कारागारबाट गतसाता भागेका ‘टीके’ भनिने टीकाबहादुर थापा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका छन् । टिके र प्रहरी टोलीबीच चितवनको रामनगरस्थित पेट्रोल पम्प अगाडि गोली हानाहान भएको हो ।प्रहरीले जवाफी फायरिङ गर्दा उनको तिघ्रा र हातमा गोली लागेको छ ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ गर्न गएको महानगरीय अपराध महाशाखाको टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको प्रहरीले चेकजाँच गरेको समयमा टिकेले प्रहरीमाथि नै आक्रमणको प्रयास गरेपछि गोली चलाइएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख दिवेश लोहनीले जानकारी दिए ।
टिके ना ४७ प ५०५२ नं को मोटरसाइकल चलाएर नारायणगढ जाँदै थिए । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगरस्थित ओम साइ पेट्रोल पम्प अगाडि शनिबार साँझ ५ः१० मा चेकजाँच गर्ने क्रममा टिकेले सुरुमा प्रहरीमाथि गोली चलाएका थिए ।
काठमाडौंबाट गएको अपराध महाशाखाको टोली र चितवन प्रहरीको संयुक्त टोलीले जवाफी कारबाहीमा गोली चलाउँदा टिके घाइते भएका हुन् । घाइते टिकेलाई तत्कालै चितवनको सरकारी अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको थियो ।
प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका कुख्यात टिके डाँकालाई थप उपचारको लागि चितवनबाट काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
टिके माघ ४ गते राति काठमाडौंबाट भागेका थिए । उनीसँगै भागेका अर्का कैदीलाई भने प्रहरीले राति नै पक्राउ गरेको थियो ।
२०७३ पुसमा कौशलटारस्थित बैंकबाट पैसा निकालेर गठ्ठाघर तर्फ जाँदै गरेकी मन्दिरा अधिकारीको ६ लाख नगद लुटेपछि महानगरीय अपराध महाशाखाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको थियो ।
रामेछापको दोरम्बार स्थायी घर भएका टीकालाई पुस २६ गते अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको थियो ।
एलजीको ‘चाडपर्व विशेष छुट योजना’ राप्रपा एकतावारे पूर्व युवराज पारसको चासो, यथासिघ्र पार्टी एकता गर्न सुझाब मासिक ३ लाखको गाैं मुत्र बिक्री ! एमाले–माओवादी ‘सूर्य’ चिह्नमा समझदारी, पार्टी एकताको नजिक होली खेल्नु अघि जान्नैपर्ने कुरा आन्दोलनरत डा. केसी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रम र यौन शोषणमा’ प्रदेश राजधानी तोकिएसंगै कतै दीपावली कतै आन्दोलन पूर्व डिआईजी सिलवालका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी कतै ल्होछार, कतै ल्होसार : तर चाड एउटै
← अफगानिस्तानको काबुलमा यस वर्षकै ठूलो हमला	भूकम्प पीडितको पैसामा विदेश सयर गर्ने कर्मचारीको ताँती →